Ukuphehlelelwa kweNzululwazi yoToliko- AfricArXiv
E papashwe ngu Iqela lokuGuqulela iNzululwazi on 6th Meyi 2021 6th Meyi 2021
Siyavuya ukuba yinxalenye ye Guqula iSayensi iqela, kunye namalungu avela kwi-Open Science movement kunye noLwazi lwaKhe. Ngale ntsebenziswano, i-AfricArXiv iza kuba negalelo ekukhuthazeni iyantlukwano yeelwimi zase-Afrika kunxibelelwano lwezifundiswa.
Esi sibhengezo sapapashwa okokuqala e blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Amalungu eqela aneemvelaphi ezahlukeneyo kunye nezizathu. Ingcali yezamanzi UDasapta Irawan ingathanda ukuba oososayensi bakwazi ukubhala ngolwimi lwabantu ababasebenzelayo. UBen Trettel isebenza ekwahlukaneni kweijethi zamanzi ezinesiphithiphithi kunye nokuzisola ngokuba ukuqonda okuninzi okuvela kuncwadi olunzima lwaseRussia akuhoywanga. UVictor Venema isebenza kwiindlela eziqwalaselweyo zemozulu kwaye ifuna ulwazi ngeendlela (zembali) zomlinganiso, ezigcinwa kwiilwimi zasekuhlaleni; Intsimi yakhe kufuneka iqonde iimpembelelo zemozulu kuyo yonke indawo kunye nedatha esemgangathweni evela kuwo onke amazwe ehlabathi. ULuke Okelo, uJohanssen Obanda noJo Havemann basebenza kunye I-AfricArxiv -Indawo ekhokelwa luluntu yokufikelela evulekileyo ukukhuthaza iziphumo zophando zaseAfrika. Banomdla wokubona uncwadi lwezenzululwazi kwiilwimi zesiNtu ludlula ngaphaya kwezithintelo zokupapashwa kwezazinzulu zeelwimi zesintu eziza nazo ngokuchaseneyo kwaye kungekudala bazosungula umzamo wentsebenziswano wokuguqulela imibhalo-ngqangi yabaphengululi baseAfrika kwiilwimi ezahlukeneyo zaseAfrika.
Iqela lexesha "Uncwadi lwenzululwazi" ineefom ezibanzi kwaye zinokuthetha nantoni na evela kumanqaku, iingxelo kunye neencwadi, ukuya kwizicatshulwa, izihloko, amagama aphambili kunye nemigaqo. Izishwankathelo kwezinye iilwimi nazo ziluncedo.
Sinomdla kwimisebenzi eyahlukeneyo yokunceda iinguqulelo: ukubonelela ngolwazi, uthungelwano, ukuyila kunye nezixhobo zokwakha kunye nokuphembelela ukubona iinguqulelo njengeziphumo zophando ezibalulekileyo.
Sinayo le bhlog, Wiki yethu, yethu uluhlu lokuhambisa kunye a akhawunti encinci yebhlogi kwiingxoxo malunga nento esinokuyenza ukukhuthaza iinguqulelo kunye nokubonelela ngolwazi malunga nendlela yokwenza iinguqulelo kunye nokufumana esele zikho.
Izixhobo ezahlukeneyo (noluntu oluzisebenzisayo) lunokunceda ekufumaneni nasekuveliseni iinguqulelo. Isiseko sedatha esinamanqaku aguqulelweyo sinokubenza bafumaneke ngakumbi. Olu luhlu lweenkcukacha kufuneka luzaliswe ngabantu kunye namaziko enza iinguqulelo, ngokunjalo iziseko zedatha kunye namanqaku avela kwiijenali zoguqulo (ukusuka kwixesha leMfazwe ebandayo). Ngonxibelelwano olufanelekileyo (APIs) abaphathi bereferensi, ijenali kunye neeprinta zokugcina kunye neenkqubo zokuphononongwa koontanga banokubonisa ngokuzenzekelayo ukuba iinguqulelo ziyafumaneka. Isiseko sedatha sinokunceda ukwakha iiseti zedatha ezinokusetyenziselwa ukuqeqesha iindlela zokufunda ngomatshini zokuguqula iilwimi ezincinci ezinamanani.
Kukho ezinkulu izixhobo ukwenzela i ukusebenzisana okuguqukayo kokunxibelelana kwesoftware. Izixhobo ezifanayo kumanqaku enzululwazi ziya kuba luncedo ngakumbi: ukuguqula inqaku kakuhle kufuna ulwazi lweelwimi ezimbini kunye nesihloko; le ndibaniselwano kulula ukuyiphumeza neqela kwaye kunye ukutolika kumnandi ngakumbi. Ukuguqulela ngokuzenzekelayo kunokubonelela uyilo lokuqala kwaye ugcine umsebenzi omninzi.
Ukuba singabona ukuba ngawaphi amanqaku abaluleke kakhulu ukuba aguqulelwe anokunyusa inkuthazo (yesizwe) yeziseko zesayensi ukuxhasa ngezimali inguqulelo yawo. Ngokusetyenziswa kwefayile ye- iilwimi ezininzi Wikidata ulwazi singa phucula ukukhangela uncwadi kunye izixhobo zeelwimi ezininzi, ukuze nayo amanqaku afanelekileyo kwezinye iilwimi afunyenwe. Ukongeza sinokwenza imigca yokubhaliweyo yeelwimi ezininzi kunye nezithethi ezingezizo ezomthonyama ukuba zinokuboniswa nazo iinkcazo ngolwimi lwabo lweenkobe ngamagama anzima.
Endaweni yokuba zixatyiswe, maxa wambi iinguqulelo zikhokelela kwisohlwayo. U-Google ngempazamo wohlwaya abantu abaguqulela amagama aphambili kuba isoftware yabo ibona ngathi ligama elingundoqo logaxekile, ngelixa amanqaku aguqulelweyo edla ngokubonwa njengokukopa. Kufuneka sithethe ngeengxaki ezinjalo kwaye sitshintshe izixhobo kunye nemithetho ukuze oososayensi abaguqulela amanqaku abo bavuzwe.
IsiNgesi njengolwimi oluqhelekileyo lwenze unxibelelwano lwehlabathi lube lula kwisayensi Nangona kunjalo, oku kuye kwenza unxibelelwano kunye noluntu olungelolwesiNgesi lube nzima. Kubantu abathetha isiNgesi kulula ukujonga ukuba bangaphi abantu abathetha isiNgesi kuba ubukhulu becala sijongana nabantu bamanye amazwe abathetha isiNgesi. Kucingelwa ukuba bamalunga nesigidi esinye abantu abathetha isiNgesi. Oko kuthetha ukuba abantu abangamawaka ezigidi ezisixhenxe abenzi njalo. Umzekelo, kwiinkonzo ezininzi zemozulu kwi-Global South bambalwa kuphela abantu abasaziyo isiNgesi, kodwa basebenzisa iingxelo ezikhokelwayo ze-World Meteorological Organisation (WMO) kakhulu. Kwi-WMO, njengombutho wobulungu weenkonzo zemozulu, apho yonke inkonzo yemozulu inevoti enye, ukuguqulela zonke iingxelo zayo zesikhokelo kwiilwimi ezininzi yinto ephambili.
Izithethi ezingezizo isiNgesi okanye iilwimi ezininzi, kumazwekazi aseAfrika (nakwamanye amazwe), zinokuthatha inxaxheba kwezenzululwazi ngokulinganayo ngokuba nenkqubo ethembekileyo apho umsebenzi wobunzululwazi obhalwe ngolwimi olungelulo lwesiNgesi wamkelwe kwaye uguqulelwe esiNgesini (okanye nakwezinye ulwimi) kwaye ngokuchaseneyo. Imiqobo yolwimi akufuneki ichithe italente yesayensi.
Amanqaku aguqulelweyo enzululwazi avulela inzululwazi kubantu abaqhelekileyo, abathanda inzululwazi, amatshantliziyo, abacebisi, abaqeqeshi, abacebisi, abayili bezakhiwo, oogqirha, iintatheli, abacwangcisi, abalawuli, amagcisa kunye nososayensi. Owona mqobo usezantsi ekuthatheni inxaxheba kwezenzululwazi ubaluleke ngakumbi kwizihloko ezinje ngokutshintsha kwemozulu, okusingqongileyo, ezolimo kunye nempilo. Ukugqithiswa kolwazi okulula kuhamba ngeendlela zombini: abantu baxhamla kulwazi lwesayensi kunye nabantu abanolwazi abanesayensi kufuneka bazi. Iinguqulelo ke ngoko zinceda isayensi kunye noluntu. Banceda ukuvelisa izinto ezintsha kwaye bajongane nemiceli mngeni emikhulu kwicandelo lotshintsho lwemozulu, ezolimo kunye nezempilo.
Amanqaku aguqulelweyo enzululwazi akhawulezisa inkqubela phambili yesayensi ngokuthepha kulwazi ngakumbi kunye nokuphepha ukusebenza kabini. Ngale ndlela baphucula umgangatho kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kwesayensi. Iinguqulelo zingaphucuka ukubhengezwa koluntu, ukuzibandakanya kwezesayensi kunye nolwazi lokufunda nokubhala. Ukuveliswa kwamanqaku aguqulelwe ngokwenzululwazi kukwavelisa idathabhe yoqeqesho yokuphucula uguqulelo oluzenzekelayo, olusasilela kwiilwimi ezininzi.
Njengokuba ufundile ukuza kuthi ga ngoku unomdla kwiinguqulelo nakwinzululwazi. Joyina nathi. Sibhalele naliphi na ixesha: sineefowuni ezi-2 ngeveki kwaye uluhlu lokuposa. Shiya iikhomenti ezingezantsi. Yongeza ulwazi kunye nemibono yakho Wiki yethu. Bhala iposti yebhlog ukuqala ingxoxo. Joyina nathi kumajelo asekuhlaleni or yongeza le bhlog kumfundi wakho weRSS. Ukusasaza umyalezo wokuba iToliki yeSayensi ikhona kuye nabani na onokuba nomdla ngokunjalo.
Yapapashwa ekuqaleni blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
iindidi:	iZazisoUkudibanaUkwahluka kweeLwimiUnxibelelwano lwezobuNzululwazi
tags: Guqula iSayensitranslationOlukabani uLwazi
iindidi Khetha Udidi Izibhengezo (11) Ukuxhotyiswa ngolwazi (7) Ukusebenzisana (27) IINKCUKACHA-19 (31) Isiganeko (6) Ngokubanzi (9) Izixhobo (1) Ulwazi lwemveli (2) Udliwanondlebe (8) Ukwahluka kolwimi (7) Ukufikelela ngokuVulekileyo (36) Inzululwazi evulekileyo (16) Intsebenziswano ibhengeza (2) Ukuphononongwa ngoontanga (7) IPodcast (1) Ushicilelo (11) Ukushicilela (14) Ingxelo (1) Unxibelelwano lwezeNzululwazi (17) Ungeniso (7)
I-AfricanResearch AI Kukubhadla okungeyonyani ASAPbio UkuBlackLivesMatter I-BlackVoicesMatter IZiko leNzululwazi eliVulelekileyo ingxoxo Covid-19 IngxoxoShift Iingxelo zeDijithali Ukufunyanwa Ukufunyanwa kophando lwaseAfrika Eider Africa Iprojekthi Noyolo Owango IYunivesithi yase-Omdurman Islamic kuvulwa fikelela ufikelelo I-OpenCollective Vula iiMephu zoLwazi vula uphononongo ngalunye uvulele isayensi Vula isakhelo seSayensi I-OSF Xa u ilungelo lokuqala Jonga kwakhona ukupapasha I-PubPub uphononongo olukhawulezileyo Ukulungiswa kwakhona Research Iphepha leNdlela Unxibelelwano lobuchwephesha Unxibelelwano lwezobuNzululwazi ScienceOpen SDG2 Sudan Iinjongo zoPhuhliso oluPhuhliso tcc-Afrika I-TCC yase-Afrika translation Uganda Indlala yeZero
Ukuba ungumphandi, mhlawumbi uqhelene nomjikelo wobomi wophando nayo yonke imingeni kunye namathuba aza nayo. Ziindaba ezimnandi ukuba ungumphandi ovela kwi-Afrika esemaZantsi eSahara Funda ngokugqithisileyo…